चेतनाले आधुनिक बन नारी तिमी - Harekpal
वन्दना पोख्रेल भण्डारी ५ कार्तिक २०७७, बुधबार १५:५१ मा प्रकाशित
‘नारी’ शब्द मात्र हैन यो एउटा विम्ब पनि हो । नारी एउटी आमा हुन् र छोरी, दिदी बहिनी, श्रीमती यी सब हुन् । वास्तवमा हाम्रो समाजको पृतिसत्तात्मक सोचले दबाएको एउटा शक्ति पनि हुन् नारी । खुशी मान्नु पर्छ नारी त्यो चङ्गुल बाट बिस्तारै बाहिर निस्किन थालिसकेकी छन्। हाम्रो समाजले सुशीलता, शालिनता इत्यादिको नाममा नारीलाई कैदी हुनुपर्ने संस्कार स्थापित गरेको छ । तर के सोच्दैन भने नारी मात्र सुशील र सालीन भएर समाज सुन्दर बन्न सक्दैन, प्रत्येक मान्छेमा नै यो लागू हुनुपर्दछ । नारीले यो गर्न हुने, त्यो गर्न नहुने भन्ने सांस्कारिक नियमहरू झट्ट हेर्दा सभ्य समाजका चिह्न जस्तो लागेता पनि त्यसको अन्तर्य भने कुनै पनि बहानामा नारीलाई एउटा संकुचित दायरा भित्र राख्ने र पुरुष स्वच्छन्द हुने उद्देश्यले समयका विभिन्न कालखण्डमा लादिएको प्रष्ट हुन्छ ।
अनि यस्ता जबर्जस्ति लादिएका पक्षहरूबाट निस्कँदै गर्दा नारी कतै न कतै अतिवाद तिर गएको लान्छना पनि लाग्ने गर्दछ । नारीको आफ्नो प्राकृतिक स्वभाव मात्र नभई त्यसलाई जिवन्त राख्न सामाजिक संरचनाको अनुकुलनलाई कायम गर्दै परिवर्तनका पक्षमा पाइला चाल्नु आजको आवश्यकता हो । तसर्थ आज यहि बिषयमा थोरै आफ्नो मत राख्ने जमर्को गरेकी छु ।
तिमी २१औँ शताब्दिका नारिहरु भौतिक सुविधा सुख सयलमा रम्ने, मिठो खाने, राम्रो लगाउने, डुल्नेघुम्ने अनि आधुनिकताका नाममा फेसन देखाउनेमा हद भन्दा ज्यादा खुल्ला भएकी छौ । कुनै चाड पर्व आउने बितिक्कै वा आउनुभन्दा अगाडिबाटै विलाशिताको प्रदर्शन गर्ने, महँगा आभुषण र वस्त्रमा हैसियत भन्दा धेरै खर्च गरेर आफूलाई विशिष्ट देखाउने भावनाले प्रेरित हुने होड चलाएकी छौ ।
अनि त्यो निरर्थकको प्रतिष्पर्धाका लागि आफ्नो आम्दानी भन्दा बढि खर्च गर्दा आफ्नो स्वतन्त्रता र आफ्नो जीवनको मूल्यलाई नै बन्धक बनाएको पनि थाहा पाएकी छौ कि छैनौ ? समय अनुसार चल्नु नराम्रो होइन तर संसार हामीले सोचेको भन्दा अगाडि बढिसकेको हेक्कै नपाई केवल देखावटीको दुनियाँमा मात्र आफूलाई सिमित गर्दा आफूमात्र नभई अब आउने पुस्ता समेत पछाडि पर्छ भन्ने कसले बुझाईदिनु पर्ने हो तिमीलाई ? तिमीले आफ्नै चेतनालाई बन्धक बनाउँदा खडा भएको गम्भीर प्रश्न होइन र यो ? राम्रो लगाउँदैमा, मिथो खाँदैमा, वाईन र बियरमा रमाउँदैमा, खुट्टामा कालो धागो बाँधेर टाउकोमा कालो चश्मा राख्दैमा, ह्याप्पी बर्डे र ह्याप्पी म्यारिज एनिभर्सरीमा व्यस्त हुदैमा अनि अर्धनग्न भएर फोटो खिच्दैमा, आधुनिक नारी मानिन्छ्यौ र तिमी ? बैबाहिक समारोह होस् या कर्मकाण्ड केवल एक अर्कालाइ पहिरन र भोजनमा दाँज्ने प्रतिस्पर्धा त केवल आडम्वर र पाखण्ड हो ।
तिमीले नजानिकनै खोजेको सुन्दरता पक्कै तिमिले गरेको जस्तो ब्याबहारमा छैन । तिमिले खुट्टामा बाधेको कालो धागो हेर के त्यस्ले तिमिलाई राम्री देखाएको छ तरु तिमिलाई खुव राम्रि देखियो झैँ लाग्दो हो, हैन र ? तर यथार्थ त्यो हुदैन मित्र १ सुन न नारि तिमीलाई घर र समाजकी गहना भनिन्छ, तर तिमी आफैँले तिम्रो घर नियालेकी छौ ? कति अस्तव्यस्त छ ? आफूलाई फूल झैँ बनाउन हजार कोशिस गर्छ्यौ, खै तिम्ले सबेरै पुज्ने भगवानका लागि तिम्रा आगनमा फूल ? पुरुष नारी जो कोहि बिहानी को सुरुवात सहित दिनको अन्त्य सम्म घर काम यताउता गर्न सक्छन् । तर मोबाइलमा चर्तिकला बाहेक केही नगरेर बाल मजदुर बनि रमाउने पक्कै तिम्रो स्वाभावमा फरक हैन अतिवाद आएको छ । परिवर्तनको अर्थ यति फरक पक्कै हुदैन । अरूले बुझाउँदैन, तिमी आफैँले बुझ्नु पर्छ ।
तिमी यो युगकी नारी हौ, जो आफ्ना हक अधिकारको लागि कति लडेकी छौ । तर यस्को मतलब यो हैन कि सभामा गएर आफ्ना हक माग्ने तर ब्याबहारमा कहिँकतै जहाँसुकै आफूलाई नै भ्रर्मित पार्ने गरि उत्रिने । यसले तिमीले आफूलाई शिक्षित भनेर उभ्याएको पक्ष पक्कै हाँसो लाग्दो हुनेछ र तिमीले चाहेको परिवर्तन पनि मजाक मात्र बन्नेछ । अरुलाई दोष दिएर आफू सक्षम छु भन्नू भन्दा आफू कस्तो के गर्दैछु राम्रोसँग ऐनामा हेर्नू उचित हुनेछ ।
हाम्रो जस्तो अनेकौँ पछौटेपनले भरिएको समाज आधुनिकता नाममा अतिवादतिर धकेलिएको यो समयमा तिमीले कर्मशिल र सक्षम बनेर सही बाटो देखाउनु छ । आफ्नो चेतनाले सभ्य र सुशील बन्नु छ । अनि प्रकृतिले तिमीलाई बनाएको दया, प्रेम र करूणाको प्रतिमूर्ति बनेर के नारी, के पुरूष सबैलाई प्रेरित गर्नुछ । यसरी मात्र कहिँ कतै दबिएका तिम्रा सपना, कैद बनेका रहर अनि खोसिएका अधिकार सुरक्षित हुनेछन् र तिमी निसंदेह शिर ठाडो पारेर हिडन सक्छ्यौ ।
ललित प्रसाद पोखरेल प्रबास हाल बिरानो मुलुकमा
निकै मार्मिक यथार्थ कूरा गर्नू भयो दिदि अझै हजूरको कलम अब्बल हूदै जाहोस हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
यथार्थ कूरा निकै सून्दर लेख
सर्वप्रथम नारी शब्द लाई सम्मान गर्दै लेखन को थालनी सुरुवात गर्नुभएको मा यश को सौन्दर्याता लाई राम्रो सङ्ग उजागर गरेको छ। हाम्रो संस्कार मा नारी लाई देवि को रुपमा मान्ने चलन छ र नारी एउटा दैवी शक्ति पनि हो। तर, यश मा अलिकती पनि नारी सम्वेदनशिलता को स्वयम् उपहास को पात्र बन्छिन भने त्यो दैवी शक्ति हराएर जानेछ र नारी ले आफ्नो पन पनि गुमाउन पुग्दछ। सम्मान पाउनु ठूलो कुरा होइन, सम्मान गोजाएर राख्न सक्नु ठूलो कुरा हो। लेखन यात्रा जारी रहोस् साथी शुभकामना छ।